Semalt: Meherad Ganacsi oo Horumarineed oo Laydh ah
Kooxda Semalt: Khubarada Adeeggaaga
Hordhac Adeegyada Suuqgeynta Dijital ah
Ganacsiyada guuleysta oo leh Semalt. Sidee?
Cusboonaysiin kasta oo cusub oo ka timaadda makiinadaha raadinta waxay ku wareegaan milkiilayaasha ganacsiga iyagoo ka baqaya kuwa aan la aqoon. Su'aal guud oo ka dhexeysa dhammaantiis - "Sidee ayaa loogu qiimeeyaa boggeyga bogga koowaad ee Google?"
Si aad u meelayso bog websaydhka ugu horreeya ee mashiinka raadinta, waxaad u baahan tahay inaad diiradda saarto qodobbada SEO kala duwan. Maaddaama milkiile kasta oo ganacsigiisu uusan awood u yeelan karin inuu sameeyo farshaxanka SEO, Hay'ado Suuq geyn oo Digital ah ayaa ballan qaada inay iyaga caawin doonaan.
Waxay u egtahay wax fiican, laakiin dhawr hay'adood oo kaliya ayaa la aamini karaa markay tahay darajaynta degel bogga koowaad ee mashiinka raadinta. Maalmahan, magac ka danbeeya guusha ganacsiyada badan ee khadka tooska ah waa Semalt. Sii wad akhriska si aad wax badan uga sii ogaato.
Semalt waxaa la aas aasay 2013 isagoo ah shirkad heerka koowaad ee IT. Xaruntu waxay ku taalaa Kyiv, Ukraine.
Waxay bixisaa Adeegyada Suuqgeynta Internetka oo tayo sare leh qiimo jaban. Semalt ujeedadiisu waa adeegyadeeda milkiilayaasha ganacsiga, khubarada suuq geynta, falanqeeyayaasha, iyo milkiilayaasha websaydhada adduunka oo dhan.
Ugu horreyn, Semalt wuxuu bixiyaa waxyaabaha soo socda:
Sare u qaad heer sare ah oo SEO ah
Fiidiyowyada Xayeysiinta ah ee Ganacsiyada
Si aad u ogaato in Hay'adda Suuqgeynta Dijital ah ay tahay mid wax ku ool ah iyo in kale, ogow faa'iidooyinka gaarka ah ee macaamiisheeda ay helaan. Marka laga soo tago inaad ganacsigaaga ku wareejiso meel sare, halkan waxaa ku yaal faa'iidooyin badan oo aad ka heli karto Semalt:
Xirfadlayaasha aqoonta leh ayaa la heli karaa 24x7
Waxaa u adeegay in kabadan 300,000 oo macmiil
Adeegyada tayada sare leh ee lagu bixiyo qiimaha ugu hooseeya
Nidaamka qiima dhimista dabacsan ayaa ka yaabiyay macaamiisha
Wakaaladaha Suuq-geynta Dijitaalka ah waxay soo bandhigi karaan natiijooyin aad u wanaagsan markasta haddii ay leeyihiin koox hal abuur leh, karti leh, firfircoon, iyo maskax dhiirigelin leh.
Semalt wuxuu ku hanweynahay inay leeyihiin koox ay ka buuxaan tayadaas. Kooxda Semalt , waxaad ka helaysaa in ka badan 115 maanka ugu fiican ee warshadaha ka jira adeeggaaga.
Khubaradan ayaa marka hore fahmaya baahiyaha ganacsigaaga ka dibna waxay isku darayaan teknolojiyadda khibradahooda si ay kuu siiyaan natiijooyin miro dhal leh.
Isku darka dadaalkooda ayaa xoojinaya joogitaanka internetka ee ganacsigaaga. Macaamiishaada mustaqbalka waxay ka heli karaan websaydhka meel sare oo ah SERPs (Bogagga Natiijada Mashiinka Raadinta).
Si loo fahmo Semalt iyo adeegyadeeda, waxaa muhiim ah inaad ogaato, ugu yaraan, aasaaska Suuqgeynta Dijital ah.
SEO waxay u taagan tahay kobcinta Mashiinka Raadinta. Waa geedi socodka lagu wanaajinayo nuxurka websaydh si ay ugu sarreeyaan liistooyinka dabiiciga ah ee matoorada raadinta.
SEO-ga, waxaad ku jirtaa, mashiinka raadinta, iyo qofka wax raadinaya. Waxaad noqon kartaa milkiile ganacsi / khabiir suuq geyn / falanqeeye / milkiilaha webka, mashiinka raadinta badanaana waa Google.
Ka soo qaad in aad qortid qoraal maqaal ku daabacan faa iidada soonka biyaha. Iyo, waxaad dooneysaa matoorada raadinta inay u muujiyaan natiijada ugu sareysa markii qofkasta uu raadinayo ereyga furaha, faa'idooyinka soonka biyaha.
Taas awgeed, waa inaad hagaajisid boostada blogka. Google ayaa u soo bandhigi doonta iyada oo ka mid ah natiijooyinka ugu sarreeya marka qof raadinayo ereygaas muhiimka ah.
Si aad u hesho faham wanaagsan oo SEO ah, tixraac tusaha-buugga-tilmaameedka ah ee SEO-ga loogu talagalay bilowga.
Waa maxay Falanqaynta Websaydhadu?
Waa geedi socodka aruurinta, falanqaynta, iyo ka warbixinta xogta degel. Waxay ka caawineysaa milkiilayaasha ganacsigu inay fahmaan oo ay kor u qaadaan wax ku oolnimada websaydhkooda.
Iyada oo loo marayo falanqaynta Websaydhka, milkiilayaasha ganacsigu waxay wax ka bartaan dabeecadahaan iyo nashaadaadka booqdayaasha boggooda:
Immisa qof ayaa booqday goobta?
Ma waxay ahayd booqashadoodii ugu horreysay, mise waa soo-booqdeyaalkoodii?
Muddo intee la'eg ayay joogeen goobta?
Immisa bog ayaa ay galeen?
Bogagdee ayay garteen?
Sidee ayay ku gaareen websaydhka - isku xirka ama si toos ah?
Waa maxay SSL?
SSL waxay u taagan tahay lakabka lakabka ee Badbaado. Waa tikniyoolajiyadda amniga ee horumarsan oo kuxirta biraawsar bog iyo shabakad websaydh iyada oo loo marayo xiriir sugan.
Badanaa, xogta la kala gudbiyey ee u dhexeeya websaydhada shabakadaha iyo daalacashada ayaa qaab qaab qoraal ah u qoran. Haddii haakarisku ay ka qaadaan xogta loo diray inta u dhexeysa websaydhka iyo biraawsarka, si khaldan ayey u isticmaali karaan.
SSL waxay hubineysaa in qayb kasta oo xog ah oo la kala wareejiyo inta u dhexeysa biraawsarka iyo shabakadda inay ahaato mid gaar ah. Si loo helo faham fiican, ka gudub Hagaha Bilowga ee SSL: Waa Maxay & Maxaa Uu Ka Dhigaa Websaydhkaaga Si Ka Aamusnaan Badan.
Waa maxay isku xirka dhismaha?
Waa geedi socodka lagu xaqiijinayo xiriiriyeyaasha kugu habboon ee ka socda boggaga kale ee boggaaga.
Ujeedada hanaanka isku xirka dhismaha waa in lagu hago xiriiro tayo sare leh oo shabakadaada. Waxay kordhisaa suurtagalnimada in websaydhkaagu uu ku qiimeyn doono meel sare bogagga 'SERPs' bogagga Natiijooyinka Mashiinnada Raadinta).
Wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan habka loo yaqaan 'Building Building building', waxaad ka dhex bixi kartaa boggaan Wikipedia.
Dukaammada wax soo saarka ee Semalt waxay leeyihiin Adeegyo Suuq-geyn oo Digital ah oo badan. Milkiilayaasha ganacsiga faa iidada leh waxay helayaan markay doortaan Semalt waa in adeegyadeeda badankood ay ku habboon yihiin baahiyaha ganacsiyada.
Kuwa ugu waaweyni waa:
La-tashi SEO ah oo Bilaash ah
AutoSEO waa aalad u gaar ah SEO oo loogu talagalay milkiilayaasha ganacsiga / khubarada suuq-geynta / falanqeeyayaasha / milkiilayaasha websaydhada kuwaas oo:
Marabtaa inaad kordhiso joogitaankooda internetka iyo iibintooda
Si aad ah uma yaqaanaan SEO iyo wax qabadkeeda
Ka doorbidid inaad aragto natiijooyinka ka hor intaadan lacagtooda ku maalgelin wax
Isla markii aad iska diiwaangeliso AutoSEO, falanqeeyaha bogga ayaa kuu soo diri doona warbixin kooban. Waxay kugula talineysaa haddii boggaaga internetka uu la socdo heerarka warshadaha iyo waxa aad sameyn karto si aad u horumariso booskeeda makiinadaha raadinta.
Faa'iidooyinka ugu horreeya ee AutoSEO waa:
Waxay wanaajisaa Websaydhka : Waxay hubineysaa in websaydhkaagu uu saaxiibtinimo u leeyahay matoorrada raadinta uuna u hoggaansamo dhaqannada SEO-ga ee caadiga ah.
Waxay hagaajineysaa Muuqaalka Websaydhka : Waxay kor u qaadaa websaydhka ereyada muhiimka ah ee la xiriira waxayna hubisaa inay ka sare martay Google markay qof raadiso ereyada muhiimka ah.
Soo-jiidashada Soo-booqdeyaasha Cusub: Ayadoo la arkay kor u qaadis muuqaal ah iyo kor u qaadis saxda ah, shabakaddaada ayaa soo jiidan doonta booqdeyaal badan. Iyo, waad ogtahay in soo booqdayaal badan ay la micno tahay macaash badan.
Waxay kobcisaa jiritaanka khadka tooska ah ee internetka : Waxay kordhisaa jiritaanka khadka tooska ah ee ganacsiyadaada badan, sidaa darteed, furitaanka fursado badan oo koritaan ah.
FullSEO waa habka ugu horumarsan uguna hufan ee lagu qiimeeyo degel ka sarreeya bogga natiijooyinka raadinta ee Google.In FullSEO, khubarada Semalt waxay fuliyaan noocyo badan oo ah kobcinta shabakadda gudaha iyo dibadaba. Waxay hubinayaan inaad hesho wax ka badan natiijooyinka aad dooneysay muddo gaaban.
Faa'iidooyinka ugu horreeya ee FullSEO waa:
Waxay wanaajisaa Websaydhka : Waxay hubisaa in degelkaaga iyo waxa ku jira ay la kulmaan heerarka SEO. Waxay kor u qaadi doontaa joogitaanka qadka ee ganacsigaaga, sidaas darteed waxay ka dhigeysaa mid caan ah.
Waxay wanaajisaa tayada isku xirka : FullSEO waxay meesha ka saartaa xiriiriyeyaasha hooseeya iyo kuwa aan dabiiciga aheyn bartaada. Waxay hubineysaa in taraafikada goobtaada ay ka timaado kaliya xiriiro tayo sare leh.
Wuxuu wanaajiyaa Booska Suuqa: FullSEO waxay ka caawisaa ganacsatada inay kor u qaadaan booskooda suuqa oo ay horay uga socdaan kuwa ay xafiiltamaan.
Natiijooyinka Degdega iyo Joogtada ah ee Muddo Dheer: FullSEO waxay hubineysaa inaad natiijooyinka dhakhso u hesho oo keliya laakiin sidoo kale si joogto ah muddo dheer.
E-Commerce SEO by Semalt waa qaab kor loo qaaday si looga caawiyo meheradda internetka inay koraan oo ay barwaaqo gaadho.
Marka loo eego E-Commerce SEO, khabiirada Semalt waxay ku siinayaan xalka gaar ah oo dabacsan ganacsigaaga. Waxay kaa caawinaysaa kobcinta ganacsigaaga rajooyinka.
Faa'iidooyinka E-Commerce SEO
Waxyaabaha soo socdaa waa faa'iidooyinka ugu horreeya ee Ganacsiga Ganacsiga SEO:
Macaamiisha Soo jiidashada leh: E-Commerce SEO waxay bartilmaameedsataa weydiimaha macaamil ganacsi ee ugu habboon ganacsigaaga. Kadibna qorsheyaal ku habboon oo xayeysiin ah ayaa loo sameeyaa si looga caawiyo ganacsigaaga inuu soo jiito iibsadayaasha cusub.
Natiijooyinka Soo Gaarsiinta: Maaddaama dukaannada E-Commerce badankood aysan ahayn lo'da lacageed, milkiilayaashoodu waxay filayaan in lacagta lagu maalgeliyey dallacsiinta ay keento natiijooyinka la doonayo. E-Commerce SEO waxay hubisaa inay maalgashigooda keenaan natiijooyin wax ku ool ah muddo gaaban gudaheeda.
Darajaynta ereyada-furaha-hooseeya: E-Commerce SEO wuxuu hubiyaa in websaydhkaagu uu u sareeyo keywords-hooseeya sidoo kale. Sababtuna waxay tahay dadka raadinaya erey-furayaal-hooseeya badiyaa waxay iibsadaan markay gaaraan dukaanka saxda ah ee internetka.
Falanqaynta Niche: The e-commerce iyo khubarada SEO ee Semalt waxay falanqeeyaan tartan ku saabsan ganacsigaaga niche. Waxay soo aruuriyaan macluumaadka waxayna u isticmaalaan inay dejiso qaab wax ku ool ah oo loogu talagalay guusha ganacsigaaga internetka.
Waa qalab falanqeyn hormarsan oo kaa caawinaya inaad la socoto waxa ka dhacaya suuqa. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad raad raacdo booska kuwa aad xafiiltamaan.
Qalabka Falanqaynta Websaydhka ee Semalt ayaa ku siinaya:
Fikradaha ereyga furaha ah ee weedho ganacsi oo habboon
Raad raac maalinle ah oo shabakadaada ku saabsan mashiinka raadinta
Heerka caanka ah ee ganacsigaaga
Xarunta si ay u daawato una ogaato booska furahaaga
Xarunta lagu baarayo laguna daraaseeyo qiimeynta mashiinka raadinta ee dadka aad xafiiltamaan
Faa'iidooyinka ugu horreeya ee aaladda 'Website Analytics' waa:
Wuxuu kormeeraa Booska Websaydhka: Qalabkani wuxuu caawiyaa helitaanka booska meheraddaada ee suuqa. Macluumaadka ay bixisaa wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ogaato waxyaabaha wanaagsan iyo kuwa xun ee saamaynaya heerka darajadaada.
Wuxuu kormeeraa booska tartamayaasha: Qalabkan Semalt wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa faahfaahinta kuwa aad xafiiltamaan. Waxaad u isticmaali kartaa macluumaadka ay ku siiso faa iidadaada.
Waxay kaa caawineysaa helitaanka Suuqyada cusub: Xogta ay hesho ka dib falanqaynta ganacsigaaga waxay gacan ka geysaneysaa helitaanka fursado koritaan oo cusub suuqyada cusub.
Waxay u Badashaa Xogta qaabab la Soo Bandhigi Karo: Waad keydin kartaa dhammaan xogta ay soo bandhigtay aaladani qaab faylasha PDF iyo tayo ah.
Goob laga bilaabo HTTPS waa aamin, Google-saaxiibtinimo, waxayna soo jiidataa booqdayaal badan. Semalt waxay bixisaa shahaadooyin SSL ah si loo xaqiijiyo degel isla markaana looga dhigo kuwa nugul weerarada.
Semalt waxay bixisaa la-talin SEO ah oo bilaash ah halkaas oo khabiiradeeda ay ku aqoonsadaan arrimaha SEO-gaaga bartaada waxayna bixiyaan talooyin si kor loogu qaado joogitaankeeda internetka.
Marka, adeegyadan ka socda Semalt waxay hubinayaan in ganacsigaaga internetka uu ku gaaro guul weyn waqti yar.
Sheekooyinkaani waxay dhamaantood kusaabsan yihiin safarrada guusha ee macaamiisha. Macaamiisha qaar waxay tagayaan hal adeeg, qaar waxay doortaan wax badan, qaarna waxay tagayaan wada tashi SEO ah oo bilaash ah kahor intaysan sameyn wicitaanka ugu dambeeya.
Faallooyinka Macaamiisha AutoSEO
Markay tahay AutoSEO, inka badan 5,000 oo boggag internet ayaa ku koray Semalt. Si aad adigu iskaa u baarto, u aad bogga Seminaarrada Guusha Semalt . Halkan, waxaad ku shaandhayn kartaa goobahan iyadoo la raacayo warshadaha iyo gobollada.
Nambaradu dhammaantood way dhahaan, ama markay tahay Semalt, macaamiisha ayaa wada dhaha. Waxaad booqan kartaa boggeeda Imtixaanka Macmiilka waxaadna dhex mari kartaa 33 marag iyo fiidiyoo 146 marag ah oo qoran. Kaliya soo hel sida ay uga caawisay boqolaal macaamiil sidii loo hagaajin lahaa ganacsigooda khadka tooska ah.
Ma dooneysaa inaad dareento safarka guusha ee macaamiisha Semalt? Kaliya galaangal u hel Bogga Kaysaska SEO macaamiisha oo la kulan macaamiishooda ku faraxsan ee si weyn ugu koray adeegyada Semalt SEO.
Semalt waa mid ka mid ah Hay'adaha Suuqgeynta Digital-ka ee tiro yar oo daboolaya in ka badan 155 dal oo ku yaal SEO.
Waxaa jira in kabadan 210 dib-u-iibiyeyaal ah adeegyada Semalt.
Shaqaalaha Semalt waa kuwo aqoon sare u leh luqado badan. Waxay u adeegaan macaamiisha iyadoon loo eegeyn luqadda ay ku hadlaan.
Inka badan 30,000 mashruuc oo uu dalacsiiyay Semalt ayaa ku jira liiska Top-10 ee natiijooyinka raadinta.
Semalt wuxuu leeyahay waraysi shaqaaleeye u gaar ah, Turbo-Turtle, kaas oo sidoo kale astaan u ah Semalt. Waa mid walwalsan, oo xafiiskiisa jooga had iyo jeer.
Adduunkan casriga ah, SEO waa furaha guusha. Haddii aad hayso aqoon kugu filan oo ku saabsan SEO oo aad haysatid waqti aad ku fiicnaato bartaada, keli kaligaa samee.
Si kastaba ha noqotee, habka ugufiican ayaa ah in la shaqaaleeyo adeegyada Wakaaladda Suuq geynta Digital-ka oo buuxa, sida Semalt, oo loo daayo inay wax ka qabtaan baahiyaha suuqgeynta internetka ee ganacsigaaga.